Aadan islam | Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Tag Archives: Aadan islam
Posted on 03/06/2015 by Ragnar	Reply	Aadan iyo xaaskiisa Xawa waxay ahayeen dad caajiba waayo si toos ah uyuu vIlaahay u abuuray iyaha kuna noolaayeen Janno Firdoosa. ‘ Aadan ‘ micnaheedu waa ‘ wasakh ‘ ee afka asalka Cibraaniga , taasi oo tilmaamaysa in laga abuuray dhoobada dhulka , ama ciidda . Aadan iyo Xaawo ayaa dhamaan aadanahu ayaa ka soo jeedan . Maxaa yeelay, iyagu waa ‘ madax ‘ ee cirqiga aadanaha ay leeyihiin calaamad muhiim ah in aannu si ay u bartano . Waxaan eegay laba aayadaha isku midka ah ee Quraanka oo ka hadlaya Aadan , iyo mid ka mid ah kitaabka Bilowgii oo ku dhex yaal Tawreed Muuse ( Musa ) . ( Riix Halkan si aad u furato aayadahani waxay oo bog kale ku qoran) .
Markii aan akhriyo aayadahan ka Buugaag Quduuska ah daawashada ugu horeysay ee aan sameeyey waxay ahayd isku mid ah oo xisaabaadkaas . In labada akoonnada ay arkayaan mid yihiin ( Aadan , Xaawa, Shaydaan ,iyo Eebe ) ; meesha waa isku mid labada xisaabaadka ( Jannada ) ; in labada meelood ee Shaydaanku ku khiyaamay Aadan iyo Xaawo ,iyo meeshii aay labadooduba aay caleemeha is ku qariyaan si aay cawradooda u asturaan marku shaydaanku duufsaday ; Islaa meeshaasu waxay aheyd meeshi uu Ilaahay (Swt) ku ciqaabay iyaga markii aay danbaabeen beerta Jannada dhexdeeda taasi uu Ilaahay (Swt) ugu horeyntii Aadan ku abuuray kadibna Xaawa ka sameeyey feedhisa. Isla goobtaas hadan Ilaahay (Swt) waa meeshi uu ugu naxariistay iyaga ee uu cawradoodu ku asturay iyo qaawanaantoodii. Quraanku waxa uu arinkooda hordhac uga dhiga isaga oo ku tilmaamaya ‘ Ciyaalkii Aadan’ ( kuwaasina waa inaga oo ah umaadii Aadan ka so abuurantay!) Taasina waxa aay ka dhigantahay ‘ Calaamadaha Ilaahay (Swt)’. Marka sida kale loo dhigo tani maha oo keliya cashar taariikh ah oo ku saabsan dhacdooyinka Xurmaysan ee la soo dhaafay.
Waa in aay na tusta oo aay na xasuusisa in aay dhacdadani aay inaga tahay- oo markaas aan is weydiina inaga oo sahaminayna sida aay calaamadahani aay inoogu kuwa mucjiso ah oo inaga inugu saabsan.
Aadan ayaa inoo Digay
Waa inaan aad uga fiirsano ama u darasadayno inaga oo aay inaga dhabtahay – in labada dhacado ee ku kala qoran (sida Quraanka iyo Tawreed ) Aadam iyo xaawa waxa keliya oo aay galeen hal danbi oo Ilaahay ( Swt) aay ku caasinimoobeen markii aay jannada joogeen taasan Ilaahay aaya iyaga xukumay. Iyagu ma leeyihiin , tusaale ahaan , toban dembiyadii caasinnimada Eebe siiyo sagaal digniin ka dibna Eebe ugu dambeyntii u gar qaybinaya . Eebe iyaga u xukumay oo ka fal mid ka mid kaliya caasinimada . Dadka intooda badan ee reer galbeedka ah ah rumeeyay Eebe waxay aaminsan yihiin in uu kaliya u xukumi doonaa ka dib markii ay ka go’an dembiyadeedii badnaa . Oo iyana waxay ku fikiraan in haddii ay dembiyadaadu yar ‘ ka badan kuwa kale inta badan , ama haddii camalkooda wanaagsan ka badanyihiin falalka ay ku caasi markaas (ama laga yaaba) wuxuu Ilaah uma xukumi doono . Aadan iyo Xaawa ee waayo-aragnimo waa digniin noogu in aanay tani ahayn kiiska . Eebana wuu xukumi xataa hal dembi oo isaga lagu caasiyo .
Tani macno hadii aan is barbar caasinnimada Eebe sharciga jabiyay quruun . Wadanka Kanada meesha aan ku noolahay , haddii aan jebiyo mid ka mid ah oo keliya sharciga (sida haddii aan khiyaameeyay cashuurta aan bixiyo) xukumadu xaq ayaay u leedahay inay I xukumaan waayo sharcigii aayan jebiyee. Anigu kuma andacoon karo inan jebiyey hal sharci oo anaan wax dil ah geeysan, ama anaan wax dhicin ama wax afduubin. Si aay dawalada Kanada ii xidho oo aan denilo u noqodo waxay ku xidhantahay aniga oo sharci kaliya jebiya. Sida awgeed Ilaahay ( Swt) sidaas oo kale weey ama si kasii fiican sharcigiisu.
Sidaas waxaa ku Sugan Calaamad ama dhacdo halkan siday Aadan iyo Xaawa aay Ilaahay (Swt) aay ku caasiyeen. Oo falkii aay jannada ku dhax sameeyen waxa aay la kulmeen ceeb iyo inaay dareeman inaay qawan yihiin ama cawradood muuqato kadib waxa aay isku dayeen inaay isku daboolaan caleemo iyaaga oo qarinaaya cawradooda rabana inaay is asturaan. Sida oo kale anigu shaqsiyan marka aan wax caasinimo ah sameeyo waxa aan dareema ceeb waxanan isku dayaa inaan astuura oo aan si ahaan u asturo- si aan uga qariyo dadka kale. Aadan iyo Xaawa waxa aay sameeyeen denbi aan Ilaahay ( Swt) ka qarsoonayn. Ilaahay (Swt) wuu arkay ina aay danbaabeen oo aay aay isaga caasiyeen kadibna talaabo ayuu ka qaaday oo wuu la hadlay iyaga. Halkan hoose ka akhri sida uu iyaga ku sameeyey ugalana hadlay.
Falalka Eebe ee Ciqaabtiisa iyo Naxariistiisa
Hadii aan si fican u barano Waxa uu Ilaahay ( Swt) ku sameeyey iyaga ( Ina oo eegayana dhacdooyinka) waxa aan ku arki doona sadeex shay oo uu ku sameeyey iyaga:
Ilaahay(Swt) iyaga waxa uu kadhigay qaar aan aduunka ku waari doonin- oo dhiman doona
Ilaahay (Swt) waxa uu iyaga ka soo saaray beerta jannada. Kadib waxa aay u soo baxeen aduunka oo ah meel adag oo lagu noolado.
Ilaahay (Swt) waxa uu iyaga dhar uga dhiigay maqarka ama haraga xoolah.
Waxa xiiso leh saddexdaas arin ee aan kor ku so xusnay dhamaan waa aaynu la wadagna iyaga ilaa iyo maanta oo aan jirno.k. Qof walba wuu dhimanayaa, hal qof- xatta nebi ama haddii kale – wali kuma laaban beerti jannada ee laga so saaray Aadan iyo Xaawa, qof kasta waxa uu xidhan yahay dhar bini aadan ilaa maalintaas . Dhab ahaantii saddexdaas qodob ‘waa caadi’ qof walba in aanu seegi xaqiiqda ah in waxa Eebe ku sameeyey Aadan iyo Xaawa ayaa weli la dareemay noo ilaa maantadan la joogo, taasi oo aay ka so wareegtay kumanaan sanno. Waa sida haddii cawaaqibka waxa maanta dhacay ayaa weli na saameynaya maanta ee ka mid ah siyaabaha ugu yaraan .
Waxa kale oo in aan halkan la soco waa in idiinyihiin, ( dharka ) Eebe ka soo ahaa naxariis Xaggiisa ka ahaatay . Haa uu iyaga u xukumay , laakiin waxa uu sidoo kale naxariis bixiyo . Eebe ma u leeyihiin in ay taasi iyaga siinayo . Aadanna & Xaawa ma kasban idiinyihiin, iyada oo loo marayo hab-dhaqanka xaqa ah ( dhaqankooda ahaantii dhan in labada Tawreed iyo Quraanka ka fog yahay xaqa ) kasbadeen ‘ mudnaan ‘ kulankii ay fal caasi . Adam & Xaawa heli karaa oo keliya marka bixinta Eebe aan qoowleeysatada ama waxay ku mutaysan . Laakiin qof ma bixin . Tawreed In badan oo si gaar ah waxa uu inoo sheegayaa in dharka laga Eebe hargahood ‘ . Oo sidaasay uga soo xayawaan yimid . Ilaa markan waxaa jiray dhimasho kuma jirto , laakiin haatan qaar ka mid ah xoolaha ( laga yaabee ido ah ama orgi , kiis kasta oo xayawaan oo maqaarka ahaa ku haboon samaynta ded ah dhar ) sameeyey mushaharka – noloshiisu la . Bahal dhintay si Aadan & Xaawa naxariis Eebe ka soo heli kartaa .
Quraanka ka dibna na sii sheegayaa in dhar sameeyey dabooli ceebtooda , laakiin dharka in ay si dhab ah loo baahan yahay ahaa ” xaqnimada , iyo in hab qaar ka mid ah dharka ay u lahayn ( harkaha ) waa calaamad xaqnimada this , iyo tani waa calaamad noo . Taas waxaan u soo qaadan si faahfaahsan si aad u raaci karaan waxa aan logu ka marinka .
“Banii Aadamow waxaan idiin soo Dejinay Dhar Astura Xumaantiinna (Cawrada) iyo Labbis (Xarago) Dharka Dhawrsashada yaase Khayr roon, Kaasina waa Aayaadka Eebe inay Dadku wax Xusuustaan.”
Runtii waxa fiican ina layas weydiyo su’aasha ah inayanu maskaxda ku hayn sida tan: Sidee ayaan u noqon karna qaar xaqa dharkoodi huwan? Ugu danbeynta nebiyaasha ayaa inooga jawaabi su’aashas aadka u mihim.
Kalmadaha Ilaah (Swt) sida uu wax u ciqaabo iyo sida uu waxa ugu naxariisto.
Laakiin hadii aan sii wadno calaamadahan- Ilaahay (Swt) saddex shay oo qudha kuma samayeen Aadan iyo Xaawa xatta inaga oo ah ( carruurtooda ), laakiin waxa kala ee uu fuliya kalmadahiisa. Waxa uu ka hadlay Ilaahay( Swt) ‘cadawnimada’ taasi oo u dhaxayen doonta dadkiisa iyo shaydanka laakiin Tawreed waxa uu si khaas uga hadlay ‘cadawnimada’ u dhaxaysa haweenayda ( Xaawa) iyo abeesada ( shaydanka ah). Ereyga Ilaahay (Swt) uu kaga hadlayn arinkaas. Ilaahay (Swt) waxa uu Tawreed ku sheegay:
“ oo colaad baan idin dhex dhigi doonaa adiga iyo naagta, iyo farcankaaga iyo farcankeeda; oo madaxaaguu burburin doonaa, adiguna cedhibtiisaad burburin doontaa.” (Bilowgii 3:15).
Halkan waxa jirta su’aal- laakin waa la fahmi kara. Haddii loo akhriyo si aad u taxatira waxa jira shan arimood oo hore loo sii sadaliyeey taasina hoos ayeeynu ka akhri iyada oo fahfahsan:
1. Ilaahay (Swt)
2. Shaydanka ( ama Iblayas)
3. Qofka dumara ( ama Xaawa)
4. Faraca ka abuurmay qofka dumara
5. Faraca ka abuurmay shaydanka
Halkan waxa aan ka eegan karna sida maabka aay calaamada ah aay xidhiidh u leeyihin midba midka kale mustaqbalka. Hoos ka firi.
jilayaasha iyo Dabeecadaha iyo xidhiidhkooda uu Eebe balan qaadka Janada noo siiyey
Waxa aanu odhan, kuwaas oo naagtuna waxay tahay. Waxaad arki doontaa in Eebe wuxuu ku hadlaa ah ‘farcankaaga’ Shaydaanka oo ah ‘farcankaaga’ naagta. In kasta oo ay tani tahay dahsoon, waxaynu og nahay hal wax ku saabsan farcankaaga this naagta. Maxaa yeelay, ‘farcankaaga’ waa in loo gudbiyaa sida a ‘isaga’ iyo ‘isaga’, waxaynu og nahay in ay tahay hal lab aadanaha. Anagoo og in aan tagi karaan qaar ka mid macne oo macquul ah. Sida la ‘isaga’ farcankii ma aha a ‘iyada’ oo sidaas ma noqon karo qof dumar ah – laakiin waxa uu ka yimaado qof dumar ah. Sida la ‘isaga’ farcankii ma aha a ‘ay’ ( maaha jamac). Oo sidaas waa farcankii gudbiyo ama waa koox dad ah in in loola jeedaa aqoonsiga qaran ama koox ka mid ah diin gaar ah. Sida la ‘isaga’ farcankii ma ah ‘waa’ (farcankiis waa qof). In kasta oo ay tani u ekaan cad waxa ay meesha ka suurtogalnimada in farcankiis waa falsafad ama wax baraya ama diin gaar ah. Sidaas farcankii maha (tusaale ahaan) Masiixiyada ama Muslimiinta, maxaa yeelay, ka dibna waxa loo gudbinayo sida ‘waa’, midna waa koox dad ah sida in Yuhuud iyo Masiixiyinta ama Muslimiinta, maxaa yeelay, ka dibna waxa loo gudbinayo sida a ‘ay’. Markaas inkastoo ay jiraan weli wax qarsoon oo ku saabsan waxa ay ‘farcankiis waa waxaan ku reebtay fursadaha badan oo dabiici ah u yimaadaan si ay maskaxdeena.
Waxa aad arki karta ereyga Eebe ka yimid (waxa uu inta badan ka hadla ‘ficil mustaqbala’ kaasi oo soo noqnoqda ) qorshaha Ilaahay( Swt) waa u jeedo uu isagu leeyhay oo u gara oo isaga uun uu fahmi karo isaga casawa jalahe. Tani ‘ farcankaaga ‘ burburin doonaa madaxa Shaydaan ( Tusaale aan, waxa aay dadku burburin doonan madaxa abeesada shaydanka ah) halka waqti isku mid ah Shaydaanku ‘ uu la dagalami doono dadka ama uu duufsan doono ‘ . Qarsoodiga ah waxa ay taasi ka dhigan tahay aan la caddeeyn karin markan . Waxaynu og nahay in ay jiraan qorshe Ilaahnimadu in la doonayo inuu kala fur .
Barashada kale ee xiisa leh waxay ka timaadaa sidaa uu Eebe anu ninka (Aadan ) anu farac ugu balan qaadin . Isagu ninka Aadan umu ballan qaadain farac sida uu ugu ballan qaaday naagtiisa ( Xaawa). Tani waa arrin aan caadi ahayn , gaar ahaan siiyey xoojinayaa wiilal soo socda kazoo farcamii doona ay awowayaashood , Tawreed Sabuur iyo Injil marayo . Dhab ahaantii , ee Kanada mid ka mid ah dhaleeceeynta oo ka mid Kitaabada Quduuska ah ee ay dadka casriga ah waa in ay iska indha khadadka dhiig maraan naagaha. Haddii aad eegto abtiriskooda waxaa la siiyay in Tawreed (Bilowgii 5) , Sabuur (1 Korintos 1-5) iyo Injiilka ( Matayos 1 iyo Lukoos 3) waxaad arki doontaa in ay gebi ahaan la hadal oo wiilashiisa ee ka imanaya reerahooda. Laakiin kiiskan waxa uu ballan qaaday in ay Aadan , Xaawa iyo abeesada waa kala duwan yihiin -ma jirto ballan qaad inu faraca ( ‘isaga’ ) ka imanaya nin . Tawreed ayaa sheegay in kaliya in ay jiri doonaan farcankaaga ka imaanaya naagta – iyada oo aan la sheegin nin.
Dhamaan dadka aaduunka kunool oo dhan, laba qof ayuunbaan waligood aabbe lahayn . Midkii kowaad wuxuu ah Aadan , kaasi uu ubuuray si toos Ilaah (Swt) . Kan labaad wuxuu ahaa (Ciise- NNKH) kaasi oo aay dhashay gabadh bikrad ah – aabbe u lahayn . Tani waxay ku haboon dhawrid in farcanku yahay waa ‘isaga, oo ah qof nin ah’ , aanu aheyn ‘ iyada, oo qof dumara ‘ , ‘ iyaga, oo dad jamaca ah ‘ ama ‘ shey ‘ . Muuqaal ahaan haddii aan akhrino ama darasadeyno su’aasha dhamaan isku meel ayeey ku dhacaysa. Ciise (NNKH) waa farcankii ka qof dumar ah . Laakiinse bal yaa isaga oo shaydanka ‘ farcan ‘ kiisa ah ? In kastoo aan meel loo raaca jirin oo anaan wax faahfaahsan laga bixin karin. Kutubta waxa aay ku sheegan inu yahay’ wiilka halaagga ‘ , ‘ Wiilka shaydaanka ‘ iyo awooda kale oo u muujinayaa inu noqonayo taliyaha ka soo horjeedii doonaa ” Masiixa ” ( Ciise ) . Kutubtii danbe waxa aay ka hadleen inu jiri doono dagaal dhex mara ‘ Caasiya Masiixa, oo ah Shaydanka ‘ iyo Masiix (Ciise). Laakiin waxaa la horrayn waxa lagu sheegay foomka dadka aan walidhalan – sida halkan , ee bilowga ugu horreeya ee taariikhda .
Sidaas boosaska ee taariikhda , gabagabeeyo tartanka u dhexeeya Shaydaan iyo Ilaah (swt) , waxa uu bilaabay wakhti dheer marki janada la sii joogay bilowga – Kitaabka ugu horeya . Markaasuu laga bilaabo halkan , bilowgii , oo ka shaqeeya jidka marayo ahaa ee rasuullada isku xigta in ay ku yimaadaan taariikhda na digayaa si aan si fiican u noqon doonaa fahmi jeer aan u yihiin in . Kuwan aragtida calaamada Aadan iyo Xaawa aan ka baranay badan . Labada Quraanka iyo Tawreed na siisay furayaasha badan . Weli ayaa wali su’aalo badan oo dheeraad ah ayaa soo sara kacay . Laakiin hadda waxaan sii wadi kartaa in safka nebiyada inay arkaan wixii ka badan ayay na bari karaan . Saasaana ku sii wadaan wiilashoodii Qaabiil iyo Haabiil .
Posted in Calaamadaha iyo Mucjisooyinka ku qoran Tawreed iyo Qur’anka	| Tagged Aadan islam, Aadan iyo Quraanka ka hor, Aadan iyo Xaawo ee Quraanka, Aadan Quraanka ka hor, Adam Nebi, Adam nebi ka islam, Adam nebi ka janno, Adam nebiga, Adam nebiga beerta, Adam nebiga islam, Adam nebiga iyo Ibliis, Adam nebiga iyo shaytan, al Kitab ku saabsan Aadan, anti-Masiix in tawreed, beer Aadan, buug Aadan, calaamad ah Aadan, Ibliis, ka hor Quraanka, nabi Aadan iyo Xaawo, Quraanka on Adam, shaytan, story of Xaawa iyo Aadan, taariikhda Aadan nebiga, Tawreed oo ku saabsan Adam, waxa aan wax Tawreed yidhaahdo oo ku saabsan Adam, waxa aanu Kitab al yidhaahdo oo ku saabsan Adam, waxa aanu Quraanka yidhaahdo oo ku saabsan Aadan iyo Xaawo, waxa aanu Quraanka yidhaahdo oo ku saabsan Adam	| Leave a reply